किन निशानामा छन् गुठीहरु ?
पश्चिमा साम्राज्यवादले नेपालका सबै संस्कृति मासेर, छिन्नभिन्न बनाएर नेपालीहरुलाई यहाँका दलहरु जस्तै संस्कृति र संस्कार विहिन पशुका रुपमा परिणत गर्न खोजिरहेको छ ताकि दिमागमा खाने, टट्टि गर्नेे र सम्भोग गर्ने सोंच मात्र बाँकी रहेका मानिसहरुलाई घाँस देखाएर आफू अनुकूल उपयोग गर्न सकियोस् । यो पश्चिमा साम्राज्यवादको सांस्कृतिक हमलाको आधारभूत रणनीति हो । यसका लागि बाबुरामको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पहिलो असफल हमला गरिएको थियो । त्यही घाँस खाने वर्ग र एमाले खोलको एनजिओ सञ्जाललाई जोडेर बहुमतका आडमा खुल्ला आक्रमण सुरु गरिएको छ । यसका पछाडि ‘होली वाईन’ रणनीति रहेकोमा शंका हुनु हुँदैन ।
यो विदेशीले लादेको १० बर्षे युद्धको कानूनी संस्करण हो । उक्त अवधिका बन्दूकहरु पुष्पकमल र बाबुरामको आदेशमा होईन, रअ, सिआईए र इसाई मिशिनरीहरुको आदेशमा पड्किएका हुन् । बुख्याँचाहरुलाई काखमा सुताएर १७ हजार नेपालीको हत्या गर्ने यिनै विदेशी आतंकवादी संस्थाहरुले नेपालका गुठीहरुलाई निशाना बनाएका हुन् । दरबार हत्याकाण्ड र दासढुंगामा पुरष्कारको प्रलोभन देखाएर यहींका घाँस खाने पशुहरुबाट काम तमाम गरेझैं गुठी विधेयक ल्याउने आततायीहरुलाई देखाईएको पुरष्कार गुठीको जमिन हो । गुठीको जमिन लुटेर खानका लागि साम्राज्यवादका जगेडाहरु सल्बलाएका हुन् । युद्धकालमा यिनीहरुले यसैगरि सम्पत्ति लुटेर खाएका थिए ।
विदेशी आडमा नेपाल र नेपाली नागरिकहरुलाई लुटेर तोंत लट्किएका यी आतंकवादी विदेशी जगेडाहरुको लुटको सम्पत्ति कब्जा गर्ने अभियान चलाउन जरुरी भैसकेको छ । यिनीहरुको सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? हिंजोको हरिकंगाल दरिद्रहरुको कुलिन जीवनले हाम्रो मानवता, नेपालको सभ्यता, संस्कृति एवं सामाजिक नैतिकतालाई गिज्याईरहेको छ । सबैभन्दा पहिले यिनै किटाणुहरु मारिनु पर्छ । लुट, व्यभिचार, अत्याचार, अमानवीयतामा प्रशिक्षित गरेर ‘कम्युनिष्ट’को पोशाकमा साम्राज्यवादले नचाएका यी प्रेतहरु नेपाल र नेपाली नागरिकहरुका काल हुन् । नक्कली मुद्दा उछालेर साम्राज्यवादका लागि हजारौंको हत्या गराउनुले नै यिनको असली परिचय दिन्छ ।